+115 ရယ်စရာနှင့်ရယ်စရာဟာသစကားစုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူအများစုသည်များသောအားဖြင့်တိုးတက်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုစသည့်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်းရှိပါသည် ရယ်စရာကိုးကား ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊ တစ်ယောက်တည်းဖတ်ရန် (သို့) အခြားလူများနှင့်စာဖတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာပေများကိုရယ်စရာဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင်သုံးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များသည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးနိုင်သည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေ့လုံးအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်ပြီးရယ်မောရန်အချိန်မယူပါ။ ဒါကြောင့်ရယ်မောစရာတွေနဲ့ရယ်စရာစကားစုတွေကိုငါတို့စုဆောင်းချင်ခဲ့တယ်၊ မင်းတို့ထဲကတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမင်းကမင်းကိုအနည်းဆုံးပြုံးအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ငါတို့သေချာပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤဟာသထိတွေ့မှုဖြင့်ကျော်ကြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်စကားစုများကိုသင်တွေ့ရလျှင်သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်ငါနားလည်တယ် ငါးနှစ်အရွယ်တောင်မှနားလည်နိုင်ပါတယ်။ ငါးနှစ်သားလေးကိုယူလာပါ !!! - Groucho မာ့က်စ်။
ခင်ပွန်းသည်ရာပေါင်းများစွာကိုငါသိ၏၊ သူတို့ဇနီးမယားကိုစောင့်စားရန်အိမ်မရှိဘဲအိမ်ပြန်ရန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှမယားများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမကွာရှင်းရှိလိမ့်မည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ငါဟာအရမ်းကိုစမတ်ကျတဲ့အတွက်တစ်ခါတလေငါပြောနေတာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ - အော်စကာဝိုင်း။
သင် farts ကိုရယ်ဖို့စမတ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ဖို့မမိုက်မဲဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ - လူးဝစ် CK
ငွေရှင်းပါ? အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဓလေ့ပါတကား! - Groucho မာ့က်စ်။
ကြည့်ပါ၊ ပြproblemနာကဘုရားသခင်သည်လူတစ်ယောက်ကို ဦး နှောက်နှင့်လိင်တံတစ်ခုပေးပြီးသွေးကိုတစ်ပြိုင်တည်း run ရန်လုံလောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ - ရော်ဘင်ဝီလျံ။
အခန်းဝန်ဆောင်မှု? ငါ့ကိုပိုကြီးတဲ့အခန်းပေးပါ - Groucho မာ့က်စ်။
ဟာသဆိုတာဟာသလိုနာကျင်အောင်လုပ်တာပါ။ - မက်စ်အဒ်စမန်း။
ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုသူတို့မသေဆုံးခင်အထိရေးသင့်တယ်လို့မထင်ဘူး။ - Samuel Goldwyn ။
ပညာရှိတို့သည်ပြောစရာတစ်ခုခုရှိသောကြောင့်ပြောဆိုကြသည်။ သူတို့ကတစ်ခုခုပြောရန်လူမိုက်များသည်စကားပြောနေကြသည်။ - ပလေတို
မည်သူမဆိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နိုင်ပါတယ်; မှန်ကန်သောမိန်းမ၊ ဘားတန်းနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်သည်။ - ဘီလ် Hicks ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကမ္ဘာပေါ်၌ဖြစ်ပျက်နေသောသတင်းသည်အမြဲတမ်းသတင်းစာနှင့်ကိုက်ညီသည်မှာမယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ - ဂျယ်ရီ Seinfield ။
စန်တာကလော့စ်သည်မှန်ကန်သောအကြံဥာဏ်ရှိသည် - သူသည်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်လူများကိုသွားသည်။ - ဗစ်တာဘေား။
အစဉ်မပြတ်ငါတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်လိုသော်လည်းယခုငါပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်သင့်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ - လီလီ Tomlin ။
ငါနင့်ကိုအနမ်းနမ်းချင်ပေမယ့်ငါ့ဆံပင်ကိုလျှော်ပေးခဲ့တယ်။ - Bette Davis က။
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်မနေ့က၏စည်းချက်နှင့်အညီလိုက်ဖက်သည်။ - Don Marquis ။
အချက်အလက်များကို ဦး စွာရယူပါ၊ ပြီးနောက်သူတို့ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်စေနိုင်သည်။ - Mark Twain
ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်။ - Heinrich Heine ။
သူသည်လူနေအိမ်များအတွက်ပရိဘောဂများကိုရောင်းလေ့ရှိသည်။ ပြproblemနာကသူတို့ကကျွန်တော့်ပဲ။ - Les Dawson
ကျွန်ုပ်၏ပြက်လုံးများသည်အလွန်ထူးဆန်းကြောင်းဝန်ခံသည်။ တိုင်းပြည်၏လူထုံမှုဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။ - Jim Carrey
ဤရွေ့ကားငါ့အခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။ သင်မကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်၌အခြားသူများရှိသည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ချစ်ခင်ရပါသောသင်္ချာ ကျေးဇူးပြု၍ ကြီးပြင်းလာပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ပြtheနာများကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ သူတို့ကိုမင်းအတွက်ဖြေရှင်းဖို့ငါငြီးငွေ့တယ်။ - အမည်မသိ။
မင်းဟာငါမြင်ဖူးသမျှထဲမှာအလှဆုံးအမျိုးသမီးပါ၊ - Groucho မာ့က်စ်။
ငါသေသောအခါငါမီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းနှင့်ငါ၏ပြာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုငါ့အလုပ်ရှင်အပေါ်စွန့်ပစ်ခံရဖို့ချင်တယ်။ - Groucho မာ့က်စ်။
တိရစ္ဆာန်တွေကိုချစ်လို့ကျွန်တော်သက်သတ်လွတ်မစားရဘူး။ အပင်ကိုငါမုန်းလို့ပဲ။ - Whitney ဘရောင်း။
ငါရုပ်မြင်သံကြားအလွန်ပညာရေးဆိုင်ရာရှာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကဖွင့်တိုင်းငါကတခြားအခန်းကိုပြန်သွားပြီးစာအုပ်ဖတ်လိုက်တယ်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ကောင်းစွာနားထောင်သူသည်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုမကြာခဏစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ - Kin Hubbar ။
သင်ဘယ်တော့မှထိုင်မနေသည့်ပါတီပွဲများတွင်သင်မနှစ်သက်သောသူသည်သင်နှင့်အတူထိုင်နိုင်သည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
သင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေတာကရေနစ်သေဆုံးတာနဲ့ထောင်ထဲမှာနေရတာနဲ့တူတယ်။ - Groucho မာ့က်စ်။
အေရိုးဗစ်စကားလုံးသည်ဂရိစကားလုံးနှစ်လုံးမှဆင်းသက်လာသည် - aero, စွမ်းရည်ကိုဆိုလိုသည်။ - Dave Barry ။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲဒီမြို့မှာတစ်နှစ်နေခဲ့ရတယ်။ - ဂျော့ဘန်း။
စကြဝuniverseာ၏အခြားနေရာများတွင်အသိဉာဏ်ရှိသောဘဝရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောညွှန်ပြချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်တစ်ခါမျှမကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ - Calvin နှင့် Hobbes ။
အားလုံးဓာတုပစ္စည်းများမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်တို့ကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းများမရှိလျှင်ဘီယာတွင်အရေးပါသောအရာဖြစ်သောရေကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ - Dave Barry ။
ရယ်မောပါ၊ ကမ္ဘာကြီးသည်သင်နှင့်ရယ်ပါလိမ့်မည်။ - အန်သိုနီ Burgess ။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင့်ဘ ၀ ရဲ့အဆိုးဆုံးနေ့က ၂၄ နာရီသာကြာလိမ့်မယ်။ - အမည်မသိ။
ဘဝဟာငါ့အတွက်ဟာသမဟုတ်တော့ဘူး; ကျေးဇူးတရားကိုမမြင်ပါဘူး - Charles Chaplin
မင်းရဲ့သံသယတွေကိုမင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတာထက်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးကြည့်ရတာပိုကောင်းတယ်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ကျန်းမာရေးစာအုပ်တွေကိုသေချာဖတ်ပါ။ အမှားတစ်ခုမှသင်သေနိုင်တယ် - Mark Twain
ဟာသတစ်ခုကအရမ်းလေးနက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ - Winston Churchill ။
အချို့သောအရာများသည်မကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်။ ငါမူကား၊ - အမည်မသိ။
ရယ်မောပါနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုသင်နှင့်အတူရယ်မော; အော်ဟစ်ခြင်း၊ လောကီသားတို့က၊ - Charles Chaplin
ခွေး၏အပြင်ဘက်တွင်စာအုပ်သည်လူသား၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပြီးခွေးထဲတွင်ဖတ်ရန်အလွန်မှောင်မိုက်လိမ့်မည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ထိုအခါရဲရောက်လာ: "အက္ခရာနောက်ပြန်ပြောပါ။ " ကောင်းပြီ၊ သူ့ကိုငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ငါမမူးဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကားမောင်းရတာအရမ်းမိုက်မဲတယ်။ - ဘီလ် Hicks ။
အချိန်ကိုသတ်ဖို့နာရီကိုချိုးဖျက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ - Woody Allen ။
အောင်မြင်သောအမျိုးသားတစ် ဦး သည်သူ၏ဇနီးအသုံးစရိတ်ထက်ငွေပိုမိုရရှိသူဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဤသို့သောယောက်ျားကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ - Lana Turner
လုံးဝအမှောင်မကျမီကအမြဲတမ်းအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ - Paul Newman
ဒီဘ ၀ မှာနောင်တရစရာတစ်ခုတည်းကငါဟာအခြားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ - Woody Allen
အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျံသန်းစေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလက်မှတ်များပေးလိမ့်မည်။ - Mel Brooks ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသောအရာမှာလူအများက၎င်းကို gastritis နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သူတို့သည် indisposition ရောဂါပျောက်ကင်းသွားသောအခါသူတို့လက်ထပ်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ - Groucho မာ့က်စ်
ဟာသသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၏လိုက်လျောညီထွေရှိမှုယန္တရား၏အမြင့်ဆုံးပြသမှုဖြစ်သည်။ - Sigmund Freud ။
သူကလူထုံနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရူးမခံပါနဲ့ သူတကယ်လူထုံပါပဲ - Groucho မာ့က်စ်။
ငါကံကိုယုံတယ် သင်မနှစ်သက်သောသူများ၏အောင်မြင်မှုကိုမည်သို့ရှင်းပြရန်လိုအပ်သနည်း ။-Jean Cocteau
ငါတကယ်အားကစားခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်။ ငါအဆီကြည့်ဖို့တကယ်ခက်ကြိုးစားရန်ရှိသည်။ - - Will Ferrell ။
လူတစ်ယောက်ဟာတစ်ဒေါ်လာကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ ၀ ယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ၀ တ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ဘာကြောင့်အချိန်ကုန်ရတာလဲနားမလည်နိုင်ဘူး။ - Fred Allen ။
ဘဝမှာငွေထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကုန်ကျတယ်။ - Groucho မာ့က်စ်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အမျိုးသားတစ် ဦး အားပြောင်းလဲခြင်းတွင်အောင်မြင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာသူသည်ကလေးဘဝကတည်းကဖြစ်သည်။ "Natalie Wood က။ "
ငါဘုရားကျောင်း၌ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သီဆိုခဲ့; လူနှစ်ရာကသူတို့ဘာသာကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ —Fred Allen ။
ဦး ဆုံးဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုသတင်းကောင်းပြောတယ်၊ ငါ့နာမည်နာလို့ခေါ်တဲ့ရောဂါရှိတော့မယ်။ - စတိဗ်မာတင်။
တောင်တော်သင်တို့ထံသို့လာလျှင်ကြောင့်ပြိုလဲကြောင့်, run ။ - အမည်မသိ။
စကြာ ၀ universeာသည်ဘုရားသခင့်စိတ်တွင်ခဏသာတွေးသောအတွေးမျှသာဖြစ်သည် အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအရာ၊ - Woody Allen
ယောက်ျားတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကငါသူတို့ကိုအမြဲတမ်းအနီးကပ်မထားဘူး။ - Lana Turner
ကျောင်းမှာရယ်စရာကောင်းတာ၊ နှောင့်နှေးတာကိုဟန်ဆောင်တာ၊ ပုံပျက်နေတဲ့လက်နဲ့ခုန်ပေါက်ခြင်းစတာတွေကိုငါအာရုံစိုက်မိတယ်။ - Leonardo Dicaprio ။
ငါမသေချာဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့မသေချာဘူး - အမည်မသိ။
ငါအကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်တကူကျေနပ်မိပါတယ်။ - Winston Churchill ။
ရှည်လျားတဲ့လမ်းလျှောက်မှုတွေကိုငါကြိုက်တယ်၊ - Fred Allen ။
ငါ့သား၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုသေးငယ်သောအရာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သေးငယ်သောရွက်လှေ၊ အိမ်ကြီးငယ်လေးနှင့်ကံကြမ္မာငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ - Groucho Marx
မိန်းမများမှတဆင့်မြင်နိုင်သည်ဟုဆိုသူမည်သူမဆိုများစွာပျောက်ဆုံးနေသည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
သင်လုံးဝထူးခြားသည်ကိုအမြဲသတိရပါ။ တခြားလူတိုင်းလိုပဲ - မာဂရက် Mead ။
ဘဝ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ငါလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်စေချင်တယ်။ - အက်ရှလေ Brilliant ။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်ကြီးစွာသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ဟာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာနေချင်ရင်။ - Groucho မာ့က်စ်။
လူနှစ် ဦး အကြားလိင်သည်လှပသောအရာဖြစ်၏ Woody Allen သည်ငါးယောက်အကြားစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်။
လိင်သည်သင်ရယ်မောစရာမလိုဘဲပြုလုပ်နိုင်သောအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်သည်။ - Woody Allen ။
မင်းကိုလူကြီးလူကောင်းလို့ငါခေါ်ရင်မင်းကိုမကောင်းကောင်းမသိဘူး - Groucho မာ့က်စ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတစ်စုံတစ် ဦး မှဖြစ်ပျက်အဖြစ်အရာအားလုံး, ပျော်စရာပါပဲ။ - Will Rogers ။
လူကြီးတိုင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာမိန်းမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့နောက်မှာသူ့ဇနီးဖြစ်သည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
သူတို့သည်သင့်ကိုတစ်နေရာရာသို့မပို့လျှင်သူစိမ်းများထံမှအားရစရာကိုလက်မခံပါ။ - အမည်မသိ။
အကယ်၍ လျှပ်စစ်မီးမရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်မီးခွက်အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ကြလိမ့်မည်။ - ဂျော့ခ်ျဂလိုဘယ်။
ငါသူ့စာအုပ်ကောက်ယူချိန်မှစ။ ငါရယ်မောခြင်းနှင့်အတူလှိမ့်မြေပြင်သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်နေ့နေ့မှာငါဖတ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ - Groucho မာ့က်စ်
ဝိုင်သည်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်၍ ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ရန်ချစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ - Benjamin Franklin ။
အဆိုပါစိတ်ကူးစိတ်သန်းကသူမဟုတ်သောအရာအတွက်လူသားကိုနှစ်သိမ့်ပေးသည်။ ဟာသဉာဏ်တစ်ခုကသူမည်သူဖြစ်သည်ကိုနှစ်သိမ့်စေသည်။ - Francis Bacon ။
နေမရှိဘဲနေတဲ့နေ့ဆိုတာညဖြစ်တယ်။ - စတိဗ်မာတင်။
မိန်းမများသင်ထင်သည့်အရာကိုမကြားချင်ကြပါ။ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုနက်ရှိုင်းသောအသံဖြင့်ကြားလိုကြသည်။ - ဘီလ် Cosby ။
မျက်စိအထူးကုဆရာ ၀ န်ကိုသွားရပါတယ်။ - အမည်မသိ။
ငါ misquoted ပြီဟုငါ့ကိုကိုးကား။ - Groucho မာ့က်စ်။
သူတို့ကလိင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အခါအဲဒါကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲ - Groucho မာ့က်စ်။
လိင်သည်တံတားကစားခြင်းနှင့်တူသည်။ သင်၌ကောင်းသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မရှိပါကသင့်၌ကောင်းမွန်သောလက်ရှိသင့်သည်။ - Woody Allen ။
ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ငယ်သောအရွယ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံရမည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
သူ၏အဝိဇ္ဇာသည်စွယ်စုံကျမ်းဖြစ်သည်။ - Abba Eban ။
သင်၏ပြproblemsနာအများစုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသူကိုသင်ကန်နိုင်လျှင်သင်တစ်လထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ - Roosevelt ရုစဗဲ့။
ငါအိပ်ဖို့လိုတယ် တစ်နေ့ကို ၈ နာရီ၊ ည ၁၀ နာရီလိုတယ်။ - ဘီလ် Hicks ။
မနက်ဖြန်မနက်အတွက်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့ဒီညတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျပြီးမှအိပ်ပါ။ - Henny Youngman ။
တစ်ယောက်ယောက်ကဒဏ်ရာရအောင်အမြဲတမ်းပျော်တယ်။ ဒါကြောင့်ပျော်စရာကောင်းပါတယ် - ဘီလ် Hicks ။
သင်သည်အစပိုင်းတွင်မအောင်မြင်ပါကသင်၏မိဘများကိုအပြစ်တင်ပါ။ - Marcelene Cox ။
ပိုကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့၏အသားအရောင်ကိုအဘယ်ကြောင့်မုန်းတီးသင့်သနည်း။ - Denis Leary ။
အဆိုးမြင်မှပိုက်ဆံချေးပါ။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ထံပြန်လာမည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ - အမည်မသိ။
ဟာသဖြစ်နိုင်သည်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်။ , ငါကအဆက်မပြတ်သုံးတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာအဲဒါကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာငါရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ - Groucho မာ့က်စ်
နိစ်စကဘုရားသခင်ဟာကျွန်မတို့ထပ်တူဘဝကိုထပ်ပြီးအသက်ရှင်သန်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာအာမခံကိုယ်စားလှယ်နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့ရမယ်။ - Woody Allen ။
မူရင်းသွန်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးညစာပင်ဤအခန်းကိုဖြည့်နိုင်ဘူး။ - Woody Allen ။
အရာနှစ်ခုသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။ စကြဝuniverseာနှင့်လူ့မိုက်မဲခြင်း၊ ပြီးတော့ငါစကြဝuniverseာအကြောင်းကိုမသေချာဘူး။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတင်း။
ဟာသလေးလေးနက်နက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ - ပီတာ Ustinov ။
ကျမပလတ်စတစ်စက်ရုံတွေကိုငါသူတို့ကိုမဆေးဘူးလို့ထင်တယ်။ "Mitch Hedberg ။ "
ငါနှစ်များတွင်ငါ့ဇနီးစကားပြောကြပြီမဟုတ်။ သူကသူမကိုမနှောင့်ယှက်ချင်ဘူး။ - ရော့ဒ်နီ Dangerfield ။
ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ - က Nicholas Chamfort ။
တစ် ဦး ကသဘောတူညီမှုဆိုသည်မှာမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမယုံကြည်သောအရာများကိုစုပေါင်းပြောဆိုရန်လူတိုင်းကသဘောတူကြသည်။ - Abba Eban ။
သူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ကိုကောင်းကင်ဘုံတွင်ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းလျှပ်စီးနှင့်မိုand်းချုန်း။ - Clint Eastwood ။
ငွေသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမပေးနိူင်သော်လည်း၎င်းသည်အလားတူခံစားမှုမျိုးကိုပေးသည်။ ခြားနားချက်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး လိုအပ်သည်။ - Woody Allen ။
အဘယ်ကြောင့်ထိုမိန်းမနှင့်ငါရှိသနည်း ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမင်းကိုသတိရစေလို့ပဲ။ တကယ်တော့၊ မင်းကငါ့ကိုမင်းကိုသတိရစေတယ် - Groucho မာ့က်စ်။
ငွေသည်ငွေရေးကြေးရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သာလျှင်ဆင်းရဲခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ - Woody Allen ။
ဟောလိဝုဒ်တွင်သင်တို့၏ရန်သူများကိုအစဉ်ခွင့်လွှတ်သင့်သည်ဟုဆိုထားသည်။ - Lana Turner
ဖုန်းမမြည်ဘူးဆိုရင်ဒါကငါပဲ။ "ဂျင်မီဘတ်ဖတ်။ "
Bigamy သည်ဇနီးအကြိမ်များစွာရှိသည်။ Monogamy အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ - အော်စကာဝိုင်း။
ပဲ့တင်သံအမြဲနောက်ဆုံးစကားလုံးပြောပါ။ - Woody Allen ။
ကျွန်ုပ်သည်အသင်း ၀ င်အဖြစ်ခံယူထားသောကလပ်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်ငြင်းဆန်သည်။ - Groucho မာ့က်စ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်တယ်လို့ပြောပြီးဒုတိယထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခဲ့တယ်။ သူကအရမ်းရုပ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်ပြောတယ်။ - ရော့ဒ်နီ Dangerfield ။
ငါ့ရဲ့သစ်ပင်ကိုကြည့်ပြီးငါဟာဘားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ - ရော့ဒ်နီ Dangerfield ။
ငါမွေးတုန်းက ၁၂ ဒေါ်လာအကြွေးတင်ခဲ့တယ်။ - ဂျော့ခ်ျအက်စ် Kaufman ။
ဤရွေ့ကားငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့အဘို့ရှာတှေ့နိုငျသောရယ်စရာစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်ပထမဆုံး ၀ င်ချိန်ကအပျက်သဘောဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတို့သည်သင်၏နေ့ကိုတောက်ပစေနိုင်သို့မဟုတ်သင်၏စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ရယ်မောခြင်း၊ ကျေးဇူးတော်မရှိဘဲအသက်သည်ဘဝမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » +115 ရယ်စရာနှင့်ရယ်စရာဟာသစကားစုများ
သင်၏ဘဝကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေရန် +220 ပျော်ရွှင်စရာအဆင့်များ